Glazed vitrified vitrified ကြွေပြားများထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူ Wintel
Wintel Ceramics Pvt. Ltd. သူတို့ရဲ့လယ်ကွင်းထဲမှာအထင်ကရအဆောက်အအုံထားခဲ့ကြသောလူများ၏အုပ်စုတစ်စုကတည်ထောင်ခဲ့သည်. Wintel Group သည်ကြွေထည်များထုတ်လုပ်သူများ, စက်မှုကြွေထည်ထုတ်လုပ်သူများ, စက်မှုကြွေထည်ထုတ်လုပ်သူများ, စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ,.
၎င်းသည်အနာဂတ်တန်ဖိုးအတွက်စက်ယန္တရားများနှင့်နည်းပညာများကိုတပ်ဆင်ထားပြီး,. ဤတန်ဖိုးမြှင့်တင်ထားသောထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေး, ဒီဇိုင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများအဖြစ်ယူဆောင်လာလိမ့်မည်။.
Wintel ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူတကွကြီးထွားလာသောခေတ်မီအဆင့်မြင့်ကြွေထည်များဖန်တီးရန်အတွက်ထိပ်တန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောကြွေပြားများဖြစ်လာစေရန်အတွက်ထိပ်တန်းနိုင်ငံတကာအချက်အချာကျသောနေရာများဖြစ်လာစေရန် Morbi တွင်တည်ရှိသည်.
Wintel ကြွေသည်ဒေသတွင်းတစ်ဝှမ်းတွင်ကြီးမားသော vitrified vinrified tile ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်. ကြာရှည်ခံပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အဖြေများကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့သည်. အစုရှယ်ယာရှင်များ၏တန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်တို့တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်ဆိုင်သူများအားလုံးအတွက်တိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်အရည်အချင်းပြည့်မီမှု, အတွေ့အကြုံရှိ,.
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနှင့်တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သမာဓိစောင့်ခြင်း, ပွင့်လင်းမှု, ပွင့်လင်းခြင်း,. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဖက်များနှင့်နည်းပညာကိုစိတ်အားထက်သန်ကြသည်. ကျနော်တို့ထိရောက်မှုကိုယုံကြည်ပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုယူပြီးသူတို့ကိုမြင်တွေ့ရခြင်းအပေါ်ကိုယ်တော့်ကိုကိုယ်တော့်ကိုယူသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ, ရှယ်ယာရှင်များ, မိတ်ဖက်များ, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်0န်ထမ်းများအားကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်များကိုချီးကျူးခြင်း,.
Wintel Group သည်ကြွေထည်များထုတ်လုပ်သူများ, စက်မှုကြွေထည်ထုတ်လုပ်သူများ, စက်မှုကြွေထည်ထုတ်လုပ်သူများ, စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ,.
ကျွန်ုပ်တို့၏ feeds အသစ်များကိုစာရင်းသွင်းရန်လက်လွတ်မထားပါနှင့်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံစံကိုဖြည့်ပါ.
2022 Wintel Ceramics Pvt. Ltd | ဒီဇိုင်း & ဖွံ့ဖြိုးပြီး : LLS - INDIA